Afar haween ah oo lala xiriiriyay Shabaab ayaa Maxkamad ku taallo Magaalada Mombasa lacag ku sii deysay – STAR FM SOMALIA
Afar haween ah oo lala xiriiriyay Shabaab ayaa Maxkamad ku taallo Magaalada Mombasa lacag ku sii deysay
Maxkamada Magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa lacag ku fasaxday haween gaaraya 4, kuwaasi oo muddo lix bilood ah ku xirnaa Magaalada Mombasa.
Haweenkaan markii hore waxaa laga qabtay Magaalada Mandheera, xilli ay doonayeen inay ka tallaabaan xuduuda Somaliya iyo Kenya u dhaxeysa, waxaana gacanta ku dhigay ciidamada ammaanka xuduuda ee dalka Kenya.
4-ta Gabdhood oo lagu kala magacaabo Khadija Abdulkadir, Mariam Aboud, Ummulkhayr Abdulla iyo Halima Aden Ali ayaa tiiba laga qaaday Lacag dhan Sh500,000 oo Shilinka Kenya ah.
Maxkamada ayaa amartay in la sii daayo haweenkaan, maadaama lagu waayay dambiyo cad, muddana ay ku xirnaayen Xabsiga.
Sarkaal sare oo ka tirsan Maxkamadda Mombasa Richard Odenyo ayaa sheegay in Gabdhahan ay xaq u leeyihiin in la sii daayo maaddaama waxa loo xiray ay ahayd xiriir ay la leeyihiin Al-shabaab islamarkaana Dastuurka Kenya uu fasaxayo maaddaama aan lagu ahayn dambi rasmi ah.
Ehelada haweenkaan ayaa aad ugu farxday Tallaabada Maxkamada ay ku sii deysay, maadaama wax dambi ah lagu waayay, laakiin lacag laga qaaday.
Haweenkaan Maxkamada ay sii deysay oo ay ka muuqatay Asturnaan badan ayaa waxa ay dib ula midoobeen qoysaskooda.
Kenya ayaa dhowr mar xuduuda Somaliya iyo Kenya ay wadaagaan waxa ay ka qabatay rag iyo dumar lagu eedeeyay inay u socdeen Ururka Al Shabaab.
Magaalooyinka Diinsor iyo Baardhere ayaa maanta waxaa booqday Taliye ku xigeenka ciidamada AMISOM Gen, Zeyinu
Wararka21 mins ago
Wararka33 mins ago